Ubungozi bokulala neziphaqulo
KUBALULEKILE ukususa iziphaqulo ebusweni ngaphambi kokulala ukuze ungabi nenkinga yesikhumba. Isithombe; Sigciniwe
PHUMELELE NXUMALO | August 21, 2019
KUHLE ukubona abantu besifazane beyikhathalela indlela ababukeka ngayo ngokufaka iziphaqulo, kepha kuhle futhi nokuthi baqaphele ubungozi bazo.
Esikhathini samanje abantu besifazane nabo sebeba matasa emikhakheni ehlukene kungabe isemsebenzini, noma emabhizinisini okungawabo. Yingakho kungethusi ukuthi owesifazane abuye ekhaya ekhathele kwesinye isikhathi engenawo ngisho amandla okugeza. Yize kunjalo, kubalulekile ukususa iziphaqulo ebusweni ngaphambi kokulala. Lokhu kusiza isikhumba esisebusweni ukuthi siphefumule ngoba iziphaqulo zisuke zivale izimbobo eziphefumulisa isikhumba. Ukususa iziphaqulo ngaphambi kokulala kwenza ubuso bukwazi ukukhiqiza izakhamzimba ezisiza isikhumba ukuthi sihlale sibukeka kahle futhi singagugi ngokushesha.
Nongoti bayakuchitha ukulala neziphaqulo ngenxa yobungozi bakho. UDokotela Eric Schweiger ucashunwe kwiHuffpost ethi ukulala neziphaqulo kungadala izinkinga zesikhumba ezifana nezinduna.
"Ukulala neziphaqulo kwenza ukuthi ubuso buhlale nokuncola lokhu okusuke kunamathele kwiziphaqulo ngesikhathi zisebusweni. Lokhu kungadala ukuthamba kwecollagen eyenza isikhumba sihlale sibushelelezi. Lokho kwenza ukuthi isikhumba sishwabane. Kanjalo, iziphaqulo zivala izimbobo eziphefumulisa ubuso ngesikhathi ulele, okungagcina sekudale izinduna ebusweni bakho," kusho uShweiger.
Miningi imikhiqizo ekhona ezitolo yokugcina isikhumba sakho ebusweni sihlanzekile. Eminye yemikhiqizo esikhona ezitolo ama-wipes obuso okususa iziphaqulo. Lawa mawipes asiza ngokuthi noma ngabe awunayo indlela yokugeza ubuso ngaphambi kokulala kepha usebenzise wona ukususa iziphaqulo ebusweni. Yize kubaluleke kakhulu ukugeza ubuso kepha nawo ama wipes ayawenza umehluko uma uwasebenzisa.
Izindlela zokunakekela isikhumba ebusweni:
- Sula iziphaqulo ngama wipes obuso
- Geza ubuso ngamanzi afudumele nensipho edalelwe ubuso (face wash)
- Manzisa icotton wool nge toner bese usula ubuso bakho nomqala, lokhu kusiza ukususa iziphaqulo ezisalele ngesikhathi ugeza ubuso
- Bhucunga ubuso bakho nge-Tissue oil ukuze ube nesikhumba esihle nesibushelelezi.